Top 5 Zavatra hatao amin'ny A Short An'i Luxembourg | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Zavatra hatao amin'ny A Short An'i Luxembourg
Top 5 Zavatra hatao amin'ny A Short An'i Luxembourg
Nandeha lamasinina Luxembourg, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 03/01/2020)
Luxembourg City dia mahagaga mitambatra ny fahiny sy ny ankehitriny miaraka amin'ny an-toerana sy iraisam-, tsotra sy ny lafo vidy. Tena azo antoka ny milaza fa amin'ny ekilekitika ireo safidy rehetra, tsy misy fahafahana Te leo anao. Izany no mahatonga izany dia sarotra ho antsika ny anarana afa-tsy ny Top 5 zavatra hatao amin'ny fitsidihana fohy Luxembourg. fa, Ho isika hanome azy handeha!
1. tantara, Art & Kolontsaina
Io tanàna tsara tarehy manome mahaliana mifangaro ny tantara, kolontsaina, zavakanto sy ny voajanahary endriky. Ary maro ny Vondrona Eoropeana sy ny biraon'ny sampana tao Luxembourg nampiantrano City, misy fomba fijery tena kolontsaina maro ho amin'ity tanàna ity.
Miaraka amin'ny maro fampirantiana sy ny tranom-bakoka, trano fiarovana ary mandany, Luxembourg Mitambatra iray tsy mampino isan-karazany ny mahaliana toerana ara-kolontsaina. Ny kolontsaina sy ny zavakanto ny Luxembourg dia tena taratry ny mponina, isan-karazany sy ny kolontsaina maro. Mety ho Luxembourg ny avonavon 'ny eran-tany tsy manam-paharoa hetsika ara-kolontsaina samihafa avy amin'ny zavakanto sy ny fomban-drazana ny fampisehoana sy ny fety. Mba hanaovana azy mora kokoa ho anao ny hahita zavakanto sy ny kolontsaina any Luxembourg, Luxembourg for Tourism nahary ny Luxembourg Card: maimaim-poana ny fidirana ho mihoatra noho ny 60 toerana ara-kolontsaina any Luxembourg sy ny Lehibe Region.
Izay tafiditra ao amin'ny Top 5 zavatra hatao amin'ny fitsidihana fohy Luxembourg, Tena tokony hitsidika ny Letzebuerg City Museum. ny tranombakoka dia mitoetra ao anaty trano manan-tantara efatra. Ny fampirantiana maharitra "The Luxembourg Tantara" mampiseho ny mahery arivo taona tantaran 'ny renivohitry ny Grand Duchy. Next ny maro ny zavatra tany am-boalohany, ny fampirantiana mampiseho ny fampandrosoana ny tanàna fampiasana andiam-tanàn-dehibe modely. Vonjimaika fampirantiana dia natao tsy tapaka amin'ny sehatra roa hafa ao amin'ny mozea. Aza adino ny mijery ny tena maha izy rehefa mitsidika!
Antwerp ho any Luxembourg Lamasinina
Bruxelles ho Luxembourg Lamasinina
Metz ho any Luxembourg Lamasinina
Paris ho any Luxembourg Lamasinina
2. Bock Casemates - Casemates de Bock
Casemates le Bock no tena mora azo idirana ambanin'ny lapa teo aloha, Montee de Clausen. Ny Bock Casemates dia 17 kilometatra tionelina lava, sokitra voalohany avy tamin'ny vatolampy ny Espaniola eo 1737 ary 1746. Ny casemates dia fantatra amin'ny maha zava-dehibe ara-tantara any Luxembourg, maha-fialofana ho an'ny mihoatra ny 35,000 an-toerana sy ny miaramila an'arivony nandritra ny Ady Lehibe I sy ny ady lehibe faharoa. Ahitana ny rivotra sy ny andalan-tsoratra mahavariana vatolampy tohatra, ny manan-tantara tionelina ny Casemates dia UNESCO World Heritage Site. Anaro ireo finday sy entana izany harona. Izany dia tsy maintsy-mahita eo amin'ny Top 5 zavatra hatao amin'ny fitsidihana fohy Luxembourg!
Cologne any Luxembourg Lamasinina
Frankfurt ho any Luxembourg Lamasinina
Amsterdam ho any Luxembourg Lamasinina
Rotterdam any Luxembourg Lamasinina
3. Lova Ara-pivavahana any Luxembourg
Ireo liana amin'ny lova ara-pivavahana dia tsy maintsy hitsidika ny trano fiangonana Quirinus. Ny fivahiniana masina Gothic trano fiangonana naorina tao 1355 ary indraindray nolavahana tamin'ny vatolampy. Ao amin'ny toerana, nisy tany am-boalohany ny jentilisa toerana masina izay ny Romanina tatỳ aoriana nivavaka toy ny Kristianina tany am-boalohany fitoerana masina. Vatolampy loharanom-doza eto. Nosoratan'i ny olona ny soa hery nanasitrana ny rano raha sendra ny maso aretina.
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-11, ny toerana efa natokana ho any Saint Quirin sy hatrany am-piandohana ny faha-13, ny asa natao tany amin'ny lava-bato roa ny trano fiangonana.
Ny trano fiangonana Gothic fivahiniana masina dia naorina tao 1355, raha ny tafo sy ny lakolosy kely-tilikambo dia nanampy rehefa afaka izany,, tamin'ny faran'ny taonjato faha-19.
St Michael Ny Fiangonana no tranainy indrindra any Luxembourg fiangonana tanàna sy ny rava ka naoriny indray im-betsaka nandritra ny taonjato maro. Saint Michel ny Fiangonan'i dia iray amin'ireo trano ara-pivavahana tranainy indrindra any Luxembourg. The trano ny tantara vanim indray 1987 Rehefa avy nanisa isa, Luxembourg nanorina trano fiangonana kely ao ny lapa antony. Ny fiangonana ankehitriny Mitambatra ny Romanesque Gothic lafin-trano ivelany amin'ny singa ara-drafitra sy ny haingon-trano anatiny Santionan'izany fiangaly. Mariho ny fefy tohany ao amin'ny nave. Large voaloto fitaratra varavarankely. Maro ireo sary sokitra ara-pivavahana. Ary ilay sary hoso-doko lehibe an'ny Virijina nitaingina ny alitara Baroque.
4. Palais Grand-Ducal amin'ny fitsidihana fohy Luxembourg
raha maritrano no zavatra, Ary Palais Grand-Ducal mila ho anisan'ny Top 5 zavatra hatao amin'ny fitsidihana fohy Luxembourg. Rehefa tany am-boalohany ny Grand fonenan'ny Duke sy ny fianakavian'ny mpanjaka, Ducal Grand Palace in Luxembourg City dia mahavariana tapa-maritrano, naorina tamin'ny taonjato faha-16, nandritra ny Renaissance Flemish. Ny lapa ny atitany endrika toa ho tsara tarehy mitambatra ny fomba isan-karazany. A marefo interplay eo tantaram-pitiavana ary tamin'ny Moyen Âge-Gothic fomba, ary ny orinasa fahazavana teti-dratsy ny alemaina endrika indostrialy – ingo Maurer.
5. Ny Chocolate House in Luxembourg City
Ny Chocolate House in Luxembourg dia fantatra noho ny sôkôla mazava ho azy. Fa ankoatra ny mamy sy ny kaikitry ny mofo isan-karazany, dia afaka ihany koa ny mankafy ny hanim-py sy ny pies salady. Rehefa feno ny lavarangana, azonao atao foana ny mipetraka ao anaty rihana na any ambony rihana.
Ny tranony dia toerana Chocolate teo anoloan'ny Grand Ducal Palace. Koa ento ny seza, ary mankafy ny Hotchocspoon. Izahay antoka fa hanao Chocolate House ny toerana tena toerana. An tsy hay hadinoina, indrindra traikefa, rehetra fanisana.
Fa fanampiny habetsahan'ny mahafinaritra, aza malahelo ny Summer ao amin'ny City Festival. Mila toerana avy any amin'ny faran'ny volana Jona hatramin'ny fiandohan'ny Septambra. Nandritra izany fotoana izany azonao atao mankafy fampisehoana maimaim-poana, tsena, fampirantiana sy ny fanatanjahan-tena ny zava-mitranga manerana ny tanàna.
Misambotra lamasinina mankany Luxembourg mampiasa SaveATrain! Ny haingana sy tsotra indrindra toerana au livre ny niainany manodidina Eoropa.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-things-short-visit-luxembourg%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / tr ny / na / de sy ny maro hafa fiteny.
#hitsin-dàlana #top5thingstodo #topthingstodo #toptips Luxembourg
Inona no The Best Chocolate Stores In Eoropa
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Nandeha lamasinina Luxembourg, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Ahoana no hanaovana drafitra A nankany Eoropa
Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
Fiaran-Dalamby Sy Fiara Fitateram-Bahoaka Tao Eoropa
10 Toerana fitsorohana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao
10 Toerana fanofana fialan-tsasatra mahafinaritra any Eropa
8 Hevitra momba ny dia fitsangatsanganana tsara indrindra
10 Fitsangatsanganana mpivady tena tadiavina
Top 10 Toerana miafina eto amin'izao tontolo izao